Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » WHO: 90% adeegyada caafimaad ee wadamada waxaa wali carqaladeynaya cudurka faafa ee COVID-19
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
WHO: 90% adeegyada caafimaad ee wadamada waxaa wali carqaladeynaya cudurka faafa ee COVID-19
WHO waxay sii wadi doontaa inay taageerto waddamada si ay uga jawaabaan noocyada sii kordhaya ee nidaamyada caafimaadka
Sannadkii 2020, waddammada la daraaseeyay waxay soo sheegeen in ku dhowaad kalabar adeegyada caafimaadka ee daruuriga ah la carqaladeeyay
3dii bilood ee ugu horreysay sanadka 2021, tiradaasi waxay hoos ugu dhacday wax ka badan saddex meelood meel adeegyada
In kabadan kalabar wadamada ayaa sheegaya inay qoreen shaqaale dheeri ah si kor loogu qaado shaqaalaha caafimaadka
Sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), Boqolkiiba 90 adeegyada caafimaad ee wadamada waxay sii wadaan inay carqaladeeyaan Cudurka faafa ee COVID-19. Waxaa jira calaamado horumar ah si kastaba ha noqotee: sannadka 2020, waddammada la daraaseeyay waxay soo sheegeen in, celcelis ahaan, ku dhowaad kalabar adeegyada caafimaadka ee daruuriga ah la carqaladeeyay. 3dii bilood ee ugu horreysay sanadka 2021, tiradaasi waxay hoos ugu dhacday wax ka badan saddex meelood meel adeegyada.
Ka gudubka carqaladeynta
Wadamo badan ayaa hada xoojiyay dadaalada lagu yareynayo carqaladeynta. Kuwaas waxaa ka mid ah ku wargalinta dadweynaha wixii ku saabsan isbeddelada ku yimid adeegga iyo bixinta talo ku saabsan siyaabaha si ammaan ah loogu raadsado daryeel caafimaad. Waxay tilmaamayaan oo mudnaanta siinayaan bukaanada qaba baahiyaha deg degga ah.
In kabadan kalabar wadamada ayaa sheegaya inay qoreen shaqaale dheeri ah si kor loogu qaado shaqaalaha caafimaadka; loo wareejiyay bukaanada xarumaha kale ee daryeelka; oo loo beddelay habab kale oo lagu bixiyo daryeel, sida bixinta adeegyo badan oo guriga ku saleysan, dawooyin bilooyin ah oo loogu talagalay daaweynta, iyo kordhinta isticmaalka telemedicine.
WHO iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa sidoo kale ka caawinayey waddamada inay si wanaagsan uga jawaabaan caqabadaha la saaray nidaamyadooda caafimaad; in la xoojiyo daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, lana hormariyo caymiska guud ee caafimaadka.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, oo ah agaasimaha guud ee WHO ayaa yiri: "Waa wax lagu farxo in la arko in dalalku ay bilaabayaan inay dib u dhisaan adeegyadooda caafimaad ee muhiimka ah, laakiin wax badan ayaa harsan in la qabto".
“Sahanku wuxuu muujinayaa baahida loo qabo in la xoojiyo dadaalada lana qaado tillaabooyin dheeri ah si loo daboolo nusqaamaha loona xoojiyo adeegyada. Waxay si gaar ah muhiim u noqon doontaa in lala socdo xaaladda dalalkii u halgamayay inay bixiyaan adeegyo caafimaad ka hor inta aan cudurku dhicin. ”